Minisiteran’ny Toekarena sy ny Faritra Boeny : niaraha-nijery ny vahaolana ho an’ny fampandrosoana | NewsMada
Minisiteran’ny Toekarena sy ny Faritra Boeny : niaraha-nijery ny vahaolana ho an’ny fampandrosoana
Niara-nidinika ny minisiteran’ny Toekarena sy ny faritra Boeny, ny herinandro lasa teo tany Mahajanga, momba ny fampandrosoana ny faritra ho fampiharana ny Drafitrasa nasionaly momba ny fampandrosoana (PND). Niara-nikaondoha sy niady hevitra ireo mpandraharaha maro ao amin’ny faritra, niarahan’izy ireo namoaka fehinkevitra ny momba ny sakana amin’ny fampandrosoana ny faritra amina sehatra maro.
Notsongain’ireo mpandraharaha ireo ihany koa ny vahaolana hiatrehana ireo izay mety ho sakana rehetra, hisian’ny asa fampandrosoana ao amin’ny faritra Boeny. Nalahatra, araka izany, izay laharam-pahamehana rehetra naroso ho fantatry ny mpitantana ao Boeny sy ny minisiteran’ny Toekarena. Nosoritana, noho izany, ny tanjona sy ny vokatra andrasana.
Nampahafantarina ireo sehatra mety hahitam-pahombiazana. Anisan’izany, ohatra, ny asa sy ny tontolo manodidina izany, ny famatsiam-bola, ny fotodrafitrasa, ny ady amin’ny kolikoly, ny hetra, ny fitsinjarana tombontsoa ara-drariny ataon’ireo mpandraharaha. Hita tamin’ny fehinkevitra nataon’ireo vaomiera isanisany, ny olana sy ny vahaolana hiatrehana izany, miaraka amin’izay nofaritana ho laharam-pahamehana.
Nosafidin’ny minisiteran’ny Toekarena sy ny teti-pivoarana ho fitaratra amin’izany asa fampandrosoana izany ny faritra Boeny, nanaovana fifanakalozan-kevitra amin’izay tokony hatao rehetra. « Betsaka ny harena ato amin’ny faritra, nefa ampahany tena vitsy amin’ny mponina ny mahita tombontsoa. Koa zava-dehiba aminay izao atrikasa izao », hoy ny lehiben’ny faritra, Saïd Ahamad Jaffar, sady nisaotra manokana ny minisiteran’ny Toekarena. Enga anie ka tsy hijanona an-tsoratra fotsiny izay niaraha-nanapaka rehetra fa ho hita ny tena fampiharana izany.